Erotophobia ama cabsi laga qabo in lamaanaha lala sameeyo | Bezzia
Maria Jose Roldan | 11/01/2022 22:24 | Galmo
Inkasta oo ay u ekaan karto qariib oo aan caadi ahayn, waxaa jira dad laga yaabo inay soo saarto cabsi ah inay la galmoodaan lammaanahooda. Cabsida noocaan ah waxaa loo yaqaan magaca erotophobia waxayna badanaa ka dhacdaa wax ka yar ilaa in ka badan. Qofka qaba cuqdada noocaan ah waxay ku bilaabataa kalsooni darro gaar ah marka ay timaado galmo uu la sameeyo lamaanaha oo waqtigu ka bato cabsida galmo ayaa noqonaysa mid sii weyn oo muuqata.
Maqaalka soo socda waxaan si faahfaahsan ugala hadli doonaa cuqdada galmada iyo sida ay si xun u saamayso lamaanaha.
1 Erotophobia ama cabsida galmada
2 Maxaa la sameeyaa haddii aad qabtid cuqdad caynkaas ah
Erotophobia ama cabsida galmada
Nacaybka noocaan ah ama cabsida ayaa wax badan ku leh waqtiga ugu dhow ee ku lug leh galmada lamaanaha, marka loo eego xaqiiqda galmada lafteeda. Qofka qaba erotophobia wuu siigaysan karaa dhib la'aan, dhibka ayaa ka dhasha marka uu xiriir galmo la sameeyo lammaanihiisa. Waxaa jira calaamado isdaba joog ah oo tilmaamaya in qofka uu qabo cuqdad noocaas ah, sida in uu dareemo raaxo la'aan marka uu la galmoodo lammaanaha ama uu sameeyo cudurdaar si uu uga fogaado daqiiqad noocaas ah. Cuqdadu waxay noqon kartaa mid aad muhiim u ah oo qofku dooran karo inuusan yeelanin lammaane.
Maxaa la sameeyaa haddii aad qabtid cuqdad caynkaas ah
Qofka qaba cuqdada noocaan oo kale ah waa inuu ogaado mar walba. in cabsida noocaas ah laga gudbi karo. Ma ahan wax sahlan ama sahlan in la gaaro laakiin rabitaan iyo dulqaad waxaad ku raaxeysan kartaa galmada lammaanahaaga mar kale. Waa kuwan tilmaamo kaa caawin kara inaad ka gudubto cabsidaas:
Waxaa jira dad badan oo la ildaran nooca cuqdadda, Sababtoo ah rajada aan ka qabay galmada uma dhigmin xaqiiqda. Si taas looga fogaado, way wanaagsan tahay in la ogaado dhammaan shakiyada laga yaabo in laga yaabo in la sameeyo waxaana lagama maarmaan ah in loo tago khabiiro sida galmo-yaqaanka.
Dhaawacyada qaarkood ee la xiriira galmada waxay noqon karaan mid kale oo ka mid ah sababaha ugu badan ee erotophobia. Xaaladdan oo kale waa muhiim in la helo gacanta xirfadle wanaagsan si uu u caawiyo xallinta dhibaatadan. Haddii ay dhacdo dhaawac, Daawaynta habdhaqanka garashada ayaa ku fiican in ay dhibaatooyinkan oo kale gadaal ka dhigaan oo aad ku raaxaysato galmada lamaanahaaga.
Galmada lamaanahaaga waa inay noqotaa wakhti aad ku raaxaysato si buuxda oo aan wax cabsi ah lahayn. Waa muhiim in la ogaado sida loo dejiyo oo loo nasto ka hor intaanad la kulmin galmo noocaas ah. Galmada xun waxay kaa caawin kartaa inay iska ilaaliso cabsida iyo inaad ku raaxaysato daqiiqad kasta oo lamaanaha ah.
Gaaban, Arrinka cabsi-cuqdadeedka galmada waa dhibaato saamaysa qayb muhiim ah oo bulshada ka mid ah. Kalsooni-xumo ama dhaawacyadii hore ayaa badanaa keena cabsida noocaas ah marka ay timaado galmo lala yeesho lammaane. Galmada lamaanaha waa inaan loo arkin wax xun iyo haddii ay tahay wax lagu farxo ama lagu qanco. Haddii kiisku sii weynaado, had iyo jeer waxaa habboon in aad u tagto xirfadle wanaagsan si uu uga caawiyo xallinta cabsida noocaas ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Galmo » Erotophobia ama cabsida galmo lala yeesho lammaane
Pregorexia, cabsi laga qabo in miisaanku kordho xilliga uurka